မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစားအသင်းသည် ဗြိတိသျှနှင့်နိုင်ငံခြားကျမ်းစာအသင်း (British and Foreign Bible Society) လက်အောက်၌ ၁၈၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကြောင့် အသင်းသည် လွတ်လပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသော မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်းအဖြစ် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၂၆၂၊ ဆူးလေးဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
To transform the people of Myanmar by the power of the Word of God
The Bible Society works every effort to make the Scripture available, by translating the Bible in the heart language of the people, publishing in the format they prefer, distributing at the price they can afford, advocating and engaging in partnership and cooperation with the Churches and Bible agencies.
Rev. William Sherratt (1899-1933)
Rev. W. H. Willans (1933-1957)
Rev. S. V. Vincent (1957-1964)
Rev. U Aung Than (1964-1985)
Rev. U Than Tun Myat (1985-1999)
Rev. Dr. Saw Mar Gay Gyi (2000-2010)
Rev. Khoi Lam Thang (2010-present)
မြန်မာဘာသာဖြင့် ကျမ်းစာအုပ်များကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဆရာယုဒသန် ဟေလသဘာသာ (ဂရိ) နှင့် ဟေဘရူးဘာသာ (Hebrew) တို့မှ ဘာသာပြန်ခဲ့သော ကျမ်းစာကို ခေတ်သုံးမြန်မာ၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် အသင်းကြီးဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ခေတ်တွင် မြန်မာ အွန်လိုင်းကျမ်းစာများကို မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်း ၏ http://myanmarbible.com Archived 29 November 2020 at the Wayback Machine. တွင်ရယူ၊ ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမျိုးစုများဖြစ်သော ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ရှမ်း၊ ရဝမ်၊ လီဆူးစသည့်ဘာသာမျိုးစုံဖြင့် ကျမ်းစာအုပ်များကို ထုတ်ဝေ၊ဖြန့်ချိလျက်ရှိသည်။ အွန်လိုင်းဘိုင်ဘယ် Online Bible တွင်လည်း ကြည့်ရှု၊ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
ကျမ်းစာနှင့်ဆိုင်သည့် အဘိဓာန်၊ အနက်ဖွင့်ကျမ်းနှင့် စာအုပ်မျိုးစုံတို့ကို ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေနေသော မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်း နှင့်အတူ၊ ခရစ်ယာန်စာပေ CLC အသင်းတစ်ခုလည်း ရန်ကုန်တွင်ရှိသည်။ ကက်သလစ် အသင်းတော်မှလည်း ကျမ်းစာအုပ်များကို ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။